Nhau - Kuti uvandudze mashandiro ekupfura kwepfuti, wakasarudza rakakodzera hasha?
Kuti uvandudze kushanda kwepfuti nenyunje, wakasarudza chaiyo hasha?
Akapfura nenyunjechinhu chakajairika kuita kwesimbi pamusoro kurapwa. Inoshandiswa zvakanyanya mukukanda, simbi, chimiro chekushandira, simbi yekugadzirisa zvikamu uye mamwe maindasitiri.Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji uye nekuvandudza kwesimba kwekugadzira, isu tine yepamusoro uye yepamusoro chinodikanwa chepasi kurapwa mhando, mutengo, uye kugona nezvimwe. inoenderana neyekupedzisira yepamusoro mhando uye kukosha kweichi chigadzirwa, saka chakwezva zvakanyanya uye zvakanyanya kutariswa.
MainZvinhu zvikuru zvinokanganisa kugona kwe kupfura kuputika:
1. Hunhu hweabrasive hunoshandiswa pakupfura nenyunje: senge mhando, chikamu, performance index (kuomarara, kuneta hupenyu) hwehasha, nezvimwe;
2. Rationality yeiyo bara yekuputika maitiro: bara kupfura nguva, kumhanya, kuyerera, nezvimwe;
3. Rationality yeiyo yakapfura blasting muchina mamiriro: iyo bara kona, kuparadzanisa nyika, guruva kubvisa maitiro, nezvimwe.
☛Hukama huri pakati pehasha hwehukuru hwehukuru uye kugona:
Huwandu hweabrasives hwakakandwa nemidziyo yekuchenesa pauniti nguva yakakura uye yakapetwa pasi pehuremu hwakaenzana, uye kugona kwekuchenesa kunogona kuvandudzwa zvinobudirira.
Mhedzisiro yehasha yekusanganisa chiyero pane kugona:
Icho chidzidzo chinorwadza kune vashandisi kutenga yakachipa uye yakaderera-mhando abrasives, inova mashoma mashoma yuan yakachipa kubva pamutengo weyuniti. Nekudaro, iyo tsvina yemutengo inokonzerwa nekuderedzwa kwepfuti yekuputika kugona iri pamusoro peichi chiyero, uye kurasikirwa kwemutengo kunokonzerwa neiyo yepasi sevhisi hupenyu inofanirwa kuverengerwa.
Nekuda kweiyi maitiro, isu takabudirira kugadzira imwe nyowani mhando yeakakwira-kuita abrasives - yakaderera kabhoni musanganiswa abrasives（Yakadzika kabhoni simbi yakapfurwa）- izvo zvinogona zvirinani kubatsira mafekitori kuzadzisa chinangwa chekudzikisa mutengo uye nekuwedzera kushanda. Isu tine timu yehunyanzvi yebasa rehunyanzvi, inosanganiswa nemakore mazhinji eruzivo rwevatengi, kuburikidza nekugadzirisa chikamu chehasha dzinosemesa uye nekugadzirisa kwepfuti yekutsvaira michina yemidziyo, tinogona kunyatsogadzirisa kushanda kwepfuti kunonoka, kubatsira vanoshanda kuti vaone kuonda manejimendi yepfuti yekuputika maitiro, uye shandura kurasikirwa kuita purofiti, uye zvinobudirira kubatsira kudzikisa mutengo uye kuwedzera kugona.
Pamusoro pekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, isu tinotarisa pakutsvagisa kwepfuti yekuputika tekinoroji, shandisa nyanzvi dzinozivikanwa dzekupfura nyanzvi kumba nekune dzimwe nyika sekambani yehunyanzvi yekambani, uve nehunyanzvi hwehunyanzvi hwebasa rebasa, uye upe zviuru zvepa-saiti. sevhisi kune vatengi gore rega rega, vachitarisana nekupa rutsigiro rwehunyanzvi uye masevhisi ekupfura kunyorera, Tarisa pane yekutsvagisa uye nekuvandudza kubva kune hasha yekugadzira tekinoroji kune chigadzirwa chishandiso tekinoroji kune-saiti yekushandisa tekinoroji.
Mushure meinjiniya pane-saiti yekutevera makadhi, batsira uye tungamira mutengi pane-saiti kudomwa;
1.Simbisa uye uvandudze manejimendi sisitimu yekuwedzera uye kushandisa bara yekuputika abrasives;
2. Yakagadziridzwa manejimendi (dijitari modhi yemusanganiswa chikamu chehasha).
Kusanganisa kwakanaka kwekusanganisa kunosanganisira kugovera kwakaringana kwemahombe, epakati nepadiki zvidimbu. Kugoverwa kunoshanduka nguva dzose nekuda kwekuparara kwakashata kunokonzerwa nekudzokororwa kwakawanda pamusoro peiyo nzvimbo yebasa. Kune abrasives ehupenyu hupfupi, zvinonetsa kuchengetedza mwero wakakodzera nekuda kwekukurumidza kwavo kuora uye kubviswa kubva muchirongwa. Iko kuchinja kwehukuru hwekuparadzira saizi kunokanganisa kumeso kwekupedzisira uye negoho.
Nguva yekupfura yakapfupiswa kubva pamasekondi makumi mapfumbamwe kusvika pamasekonzi makumi masere, uye kugona kwacho kunowedzerwa neanopfuura gumi%;
Mazhinji mafuti ekuputika masayiti haana hunyanzvi zvakakwana mukushandisa kwakashata uye nekugadzirisa kupfura, kana saiti yacho haisati yasvika pazvinodiwa zvehutariri hwakanaka, zvichikonzera kuita kana zvakanakira hasha dzekupfura nenyunje hadzisi kutamba zvakanaka.
Munzvimbo inowedzera inokwikwidza yemusika, mabhizinesi ekugadzira anonetsekana nezve kudzikiswa kwemutengo kwechero kugadzirwa link. Kunyange isu tiri kunetseka nezve hombe zvinhu uye makiyi ma link senge mbishi zvigadzirwa, simbi, kutenderera uye goho, isu tinofanirwa kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kwepfuti yekutsvaira kuchenesa. Kusarudzwa kweakakwira-kuita abrasives uye nyanzvi kupfura blasting tekinoroji rutsigiro hapana mubvunzo kiyi yekuvandudza yekuchenesa kunyatsoita Iyo yakanyanya nyore nzira yekudzikisa mutengo, shanduko iyi inosimudzira iyo yekushandisa tekinoroji yekupfura kuputika uye nekuvandudzwa kwemitengo kudzora!
Kunze kweiyo yakaderera kabhoni simbi kupfura：
TAA zvakare chigadzirwa simbi yakapfura,simbi grit,akatakura simbi bara,simbi isina waya yakatemwa waya,Stainless simbi grit,kabhoni simbi yakatemwa waya, chipanji vezvenhau hasha,aruminiyamu yakatemwa waya, zinc yakatemwa waya, mhangura yakatemwa waya,garnet zvichingodaro.
TAA's nenyunje muchina & kupembedza zvikamuzvakare inogona kubatsira mutengi kuwana imwechete-yekumira kutenga kwe blast application!
Post nguva: Kubvumbi-26-2021